अभिभावकले काममा व्यस्त रहेर बालबालिकालाई समय नदिनु नै सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक पक्ष हो । – " कञ्चनजंगा News "
अभिभावकले काममा व्यस्त रहेर बालबालिकालाई समय नदिनु नै सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक पक्ष हो ।
No Comments on अभिभावकले काममा व्यस्त रहेर बालबालिकालाई समय नदिनु नै सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक पक्ष हो ।
काठमाडौ, १४ जेठ–अभिभावकको रोजगारीले बालबालिकालाई के दिन्छ ? सबैको जवाफ हुन्छ लालनपालन तर रोजगारीका नाममा कामको पछि दौडिएर छोराछोरीलाई समय नदिदाँ उनीहरूको जीवनलाई कसरी मनोवैज्ञानिक असर गर्छ भन्ने कहिले सोच्नुभएको छ ?
उनले अभिभावकले बालबालिका सँग समय नबिताउँदा उनीहरु अन्तै माया पाउने आशामा भाँैतारिन सक्ने जानकारी दिइन् । डा। अमात्यले अहिले काम नगरी खाने अवस्था छैन् कामबाट आइसकेपछि एक घण्टा भए पनि छोराछोरी सँग खेल्नु र रमाइलो गर्नुपर्छ ।
बुवाआमाले बालबालिकालाई समय नदिँदा अभिभावले कोहीसँग राम्रोसँग बोल्दा पनि रिस गर्ने, आमाबुबा देख्नेबित्तिकै रुने, विद्यालय जाँदा पनि एकोहोरो बस्ने, कोहीसँग मिल्न नखोज्ने, झगडालु स्वभावको हुने, कोही सानो बच्चालाई माया गरी बोलेमा टोलाएर हेर्ने जस्ता व्यवहार हुनसक्ने उनको भनाइ छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
← आमाले गरिन आफ्नै छोरा को हत्या → अष्ट्रेलिया सरकारलेे नेपाल भ्रमणमा रहेका र आउन चाहने आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएको छ